The ise-esi anwụde na iri atọ paylines oghere, Agha a kwadoro site na Thunderkick Software. a ohere mpere bonus game na mmụọ nsọ site ukwuu ụtọ Mexico mgba àjà ibu nke ntụrụndụ na egwuregwu.
Banyere Developer nke Luchadora
a ohere mpere bonus game na-mepụtara site na-eto eto ma ekwe ụlọ ọrụ na-akpọ Thunderkick na mmekota na NYX. The online egwuregwu mepụtara a ụlọ ọrụ na-enye dịgasị iche iche gburugburu, tinyere ihe gameplay.
a ohere mpere bonus game ise na-esi anwụde na ahịrị anọ oghere nke pụtara na e nwere ebe anọ na akara na nke ọ bụla ukwu. The iri atọ paylines nke Luchadora na ofu. The egwuregwu na-edoziri na mgba mgbaaka na ya anọ akara nkuku na ọtụtụ mgba akwụkwọ ịma ọkwa na-tọgbọrọ aghara aghara banyere ya. The akara nkuku ga nwere a isi ọrụ na bonus atụmatụ. The ohere mpere bonus game nwere ike na-egwuri si a kacha nta nzọ nke 10p na ruo kacha nzọ nke £ 100 kwa atụ ogho dị iche iche dakọtara ngwaọrụ. Anọ masked mgba El Toro, Rayo, agwọ, na El Pantera, nakwa dị ka feisty na eerie Campeon, bụ elu-uru ihe oyiyi na-esi anwụde. The ala-uru na akara na-anọchi anya ụfọdụ mbụ Mexico akwụkwọ nri dị ka-ede ede na chillies dị iche iche na agba. a ohere mpere bonus game nwekwara abụọ bonus akara. Ha na-e sere site Lucha Smackdown na Luca Daashi akara.
The dị iche iche nke a oghere na-:
Ring n'akụkụ- N'oge mgbe egwuregwu ma ọ bụrụ na ọ bụla mgba na-egosi na ọ bụla nnọọ akuku mgbe niile ọzọ yiri ihe nnọchianya na-esi anwụde ga-agbanwe n'ime wilds. Nke a na-enye gị mma Ohere nke na-akpụ elu emeri n'ịgwa. The wilds ga-eji dochie ihe niile isi na akara.
mgba Smackdown- Na mgbe egwuregwu, a icon ala naanị na ukwu 5 na enọ ị 7, 11, ma ọ bụ 15 free spins na-akwụ gị ụgwọ na ruo 15x multiplier.
Lụọ Free spins- Nke a na atụmatụ na-butere site ọdịda atọ ma ọ bụ karịa Lucha bonus icon. ị na-enweta 7, 11, and 15 free spins maka ọdịda 3, 4, ma ọ bụ 5 bonus akara. The mgbanaka nkuku bụ ike n'oge a mma. Ọ bụla mgba ọdịda ọ bụla n'ime ha ga-anọgide na-anụ maka oge nke feature. All anọ mgba na-agbanwe agbanwe n'ime wilds na-eme ka ndị ọzọ uru icon La Luchadora-ebe niile Misterioso Campeon oyiyi.
luchadora bụ a kediegwu oghere na ọ bụghị naanị anya ịtụnanya na-enye ibu nke ntụrụndụ ma nwekwara ole na ole ukwuu na-akwụghachi ụgwọ bonus atụmatụ.